Baaritaan xagga da’da ah oo lugu sameeyneyo dad gaaraya 14.000 oo qof | Somaliska
Baaritaan xagga da’da ah oo lugu sameeyneyo dad gaaraya 14.000 oo qof
Laanta socdaalka dalkaan Iswiidhan ayaa baaritaan xagga da’da ku sameeyneysa dad gaaraya 14.000 (afar iyo tobban kun). Waaxda u qaabilsan daaweynta sharciga ee dhinaca baarista dembiyada ee “Rättsmedicinalverket” ayaa dhawaan la filayaa in loo soo gudbiyo baaritaankii ugu horeeyey ee xagga da’da ah ee lugu sameeyey muhaajiriin.
Haweeneyda lugu magacaabo Åsa Carlander Hemingway, oo ka tirsan laanta socdaalka dalkaan Iswiidhan oo u warameeysay idaacadda raadiyo Iswiidhan ayaa sheegtay in da’da oo la cadeeeya ay muhiimad u leedahay codsiga magangalyo si beey tiri aan meel qura la wada geeyn dhalaanka iyo dad waaweeyn ee qaan gaarka ah.
Dad gaaraya 1340 (kun iyo sadex boqol iyo afartan) qof ayaa loo diray baaritaankaasi, waxaase ogolaatay oo keliya 1207 ( kun iyo labbo boqol iyo tododobo). Wakaaladda ayaa xustay in sanadkan aynu ku jirno in la qiimeeyn doono da’da magangalyo doon gaaraya inta u dhaxeeysa soddon kun ilaa afar iyo tobbon kun oo qof. Qiimeeyntan ayaa ah mid lugu eeggayo goowka dambe ee ilkaha (gows dambeedka) iyo jilbaha kala goosyadda.
Arrimahan ayaa imanaya xilli labbo maalmood ka hor si qasab ah dalka looga musaafuriyey dhalinyarro reer Afgaanistaan ah oo tobboneeyo gaarayey kuwaas oo da’dooda la kordhiyey. Halka ay qaar kalena weli sugnayaan in iyagana dalka laga musaafuriyo.
Wasiirka Socdaalka Sweden oo doonaya in uu shuruudo dheeri ah ku xiro midaynta reeraha
Barnaamijkii ka baxay SVT ee xaaladda Soomaaliya ku eegayey oo “wel wel soo kordhiyey”
Magaalooyin badan oo cabasho ka keenay qaabilaada qaxootiga